Ukuphupha ngobubi Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Isidingo, ukubandezeleka, kunye nosizi ngokuqinisekileyo zizinto ezingafunekiyo kuthi. Abanye abantu, uloyiko okanye inkxalabo malunga nentlupheko inokude ikhokelele ekuzonwabiseni okugqithisileyo. Kuba xa kunokwenzeka "amaxesha amabi", ngokuqinisekileyo uthathe amanyathelo okhuseleko.
Kwakhona emaphupheni sinokufumana ukugula, i-duel okanye imeko engxamisekileyo. Singazifumana sisesibhedlele, kwiklinikhi yeziyobisi, okanye kwikhaya labalupheleyo, nangona sibancinci kakhulu kwaye sisempilweni el mundo ukuvuka kweziko elinje. Kodwa ngaba iphupha elinjalo libonisa kuphela uloyiko lokuba imeko enjalo inokuvela? Okanye mhlawumbi kukho okungaphaya kwesi siqulatho sephupha?
1 Uphawu lwephupha «usizi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «usizi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «usizi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «usizi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokutsho kohlalutyo ngokubanzi lwamaphupha, nabani na ozibona esenkathazweni ephupheni lakhe kungekudala angalindela ilifa elityebileyo. Ukuba umntu unxunguphele ephupheni okanye uhlala kwindawo ehluphekayo, uba ngumntu kwihlabathi elivukayo. umyalezo oko kuza nosizi nentlungu. Oku kuyakuyekisa umnqweno wangaphambili wobuthongo wokufumana impumelelo.
Kwelinye icala, ukuba umntu ophuphayo ubona abanye abantu besezinkathazweni okanye begqogqa inkunkuma ngelixa elele, uya kujongana nokuswela kwixa elizayo. Le meko injengephupha inokubonisa umona wabanye, kunye nokulwa phakathi kwabahlobo.
Ubomi obusweleyo kunye nobunzima njengophawu lwephupha bahlala bebonisa ubuthathaka kwaye Ubuthathaka. Umphuphi uziva engenayo imisebenzi yakhe kwihlabathi lokuvuka okanye uziva ethintelwe kakhulu ziimeko zakhe zokuphila zangoku.
Ngapha koko, umfanekiso ophuphayo "wentlupheko" ngokunxulumene nentlupheko kunye nentlungu inokubonisa ukuba umntu ekuthethwa ngaye uswele imali okanye iitalente ekuvukeni ubomi ukuze afezekise iinjongo zakhe ezichaziweyo. Ukuba ukubandezeleka kubonwa njengesibetho ephupheni, unokujongana notyelelo olungemnandanga.
Ukuba ilishwa lenzeka kwelinye ephupheni, lifake umphuphi kwinkxwaleko, umntu kufuneka ajonge phambili. umngcipheko ongenakubalwa lumkela ilizwe lokwenyani. Ngaphandle koko, oku kunokuba yingozi kulowo uleleyo. Ukuba umntu uphupha ngesidingo esibuhlungu okanye esingxamisekileyo, oku kungabonisa ukubawa okugqithisileyo, okuvela ngenxa yokoyika intlupheko.
Ukunqongophala kwemali njengophawu lwephupha ikakhulu kubonisa ukungabikho kokuzithemba okanye ukuziva ungancedi.
Uphawu lwephupha «usizi» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, uphawu lwephupha "usizi" lunokubonwa njenge Uphawu lwesilumkiso yokungabikho zingqondweni kunokuqondwa. Kungenxa yokuba iphupha likwihlabathi elivukayo lisenza nje into enokuthi ilimaze. Nokuba abo benza ngokuchasene neenkolelo zabo zangaphakathi bangaphupha usizi kunye nembandezelo.
Ukuba ubona ukungahambi kakuhle okanye ingxaki kumaphupha abanye abantu, eyakho kufuneka ibe yeyakho imeko entle yokuphila qaphela inyani. Oleleyo kufuneka aqonde ngephupha lakhe ukuba uphilile kangakanani kwaye kufuneka aneliswe kuko.
Ukuba umphuphi uziva usizi lwephupha njengomthwalo okanye umthwalo, ngokokuchazwa kwengqondo ngephupha, ulonwabo kunye novuyo kungekudala luzakuba sekhayeni lakhe.
Ukuba iphupha belifuna ukunceda abanye abantu abasokolayo ephupheni labo, lona ngokwalo kungekudala liza kuba lixabiso. Uncedo Yamkela. Nangona kunjalo, ukuba akanankathalo kule nkxwaleko ephupheni, umntu ochaphazelekayo kufuneka alindele ukubhubha.
Uphawu lwephupha «usizi» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwephupha lokomoya kutolika iphupha losizi nentlupheko njengophawu lomntu. Ukuzinyelisa lowaphuphi.
Iphupha malunga neshishini